Ngemuva kwesigungu esibi, esasungula ithelevishini yaseParis Hilton yaseGibhithe, inkanyezi ihlose ukusola abahleli be-show. Kodwa-ke, lo mbiko ubike ukuthi uHilton wayazi mayelana nokuhleka usulu kusengaphambili.
Indaba eyenzeka ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ne-draw enonya kaParis Hilton iyaqhubeka ingenye yezinto ezixoxwa kakhulu kumaphephandaba. Izolo kukhona ulwazi ukuthi udumo lwaseHollywood luhlela ukuya enkantolo ukubiza abahleli behlaya elingaphumeleli. Ngokommeli wezingonyama zezwe, ngemuva kokubhekana nokucindezeleka, wesaba ukuhamba ngendiza.
Inkanyezi eneminyaka engu-32 ubudala ithi ngesikhathi "ukushayeka kwezindiza" wayenesiqiniseko sokuthi imizuzu embalwa indiza yayizophela futhi wonke umuntu uzofa. Abangane baseParis babengazi ngomdwebo ozayo, ngakho behluleka ukumxwayisa.
Efuna ukusekela i-blonde enhle, abasebenzisi be-intanethi bawile ukugxeka esiteshini, bahlela i-rally okubi. Izindaba ukuthi uParis uhlose ukusola ithelevishini yaseGibithe, yamukelwa yi-bloggers ngokuvunywa.
Kodwa-ke, izindaba ezivela ngokoqobo namuhla zingashiya ezinye izinkumbulo ezivela kudumela le-teledivy.
Isitatimende se-Western media: U-Hilton wayazi kahle ukuthi uhilelekile emhlanganweni.
I-Paris Hilton ingasayina isivumelwano esikhethekile
I-Portal TMZ, ngokubhekisela emthonjeni ongaziwa, iqinisekisa ukuthi iParis inamakhohlisi anemifanekiso enamandla kakhulu kule ndege. Ekusekeleni lokhu, ithebhulethi icacise idokhumenti echaza yonke imininingwane yesikhangiso esizayo. Ngokuyinhloko, lesi sivumelwano sithi:
"Senza sengathi indiza inehlobo oluthile lokungasebenzi kahle, futhi sicela bonke abagibeli ukuba bashiye indiza ngeparachute. Konke okwesaba, ama-paratroopers ochwepheshe aphuma ngaphandle kwezindiza. Susa ukusabela kwendwendwe yethu yezinkanyezi ngesikhathi esithola ukuthi udinga ukugxuma ... "
Le dokhumenti iphinde ithi uNkosana Hamdan Bin Rashid Al Maktoum ngokwakhe uqondise lo msebenzi, kanti iziphathimandla zaseDaily ziyazi ukuthi kwenzekani.
Izivumelwano ezinjalo zithunyelwe kumakhokheli amaningi aseMelika emuva ngo-Mashi.
Ukuze uhlanganyele ekuthuthukiseni izinkanyezi ze-TV ze-Egypt, izinkanyezi zathembiswa imali enhle. Mayelana nesamba esiqondile sokuthi udumo olungavumelana ukuthi luhlanganyele kule phrojekthi, i-portal ayibiki, noma kunjalo, isamba esinama-zero ayisithupha.
Abalobi bezindaba babangazi ukuthi leli talenta laseParis, ngoba ngesikhathi sakhe, ebhekene nefilimu elishaqisayo elithi "House of Wax", wasetshenziselwa ngokugcwele indima yesisulu.
Indoda ehloniphekile ye-PR uT Tim Brick ishonele emtholampilo wokuhlinzwa epulasitiki
Abafundi abangu-7 be "Factory of Stars", abaphumelele ukuba yizinkanyezi zebhizinisi lokubonisa, izithombe ezingavamile
UDmitry Shepelev waba ngumbukiso womndeni oholayo
U-Maxim Galkin ukhumbuze ababhalisile be-hero yefilimu "isici esingu-5", isithombe
Indlela yokusika kahle izihluthulelo zekati?
Ukungabi nobulili emshadweni, izizathu
Isaladi nge-Camembert ne-Pear Salad
Ama-muffin enqolobane neCheddar ushizi
Burrito ngezinkomo kanye nobhontshisi
Ukuzivocavoca ngomgogodla ngokwendlela ye-Pilates
I-TOP-4 yefashini: Izitayela zebusika 2016-2017 (isithombe nezitayela)
Izenzo zamadoda ezicasula abesifazane
Ungangena kanjani ngemuva kokubeletha?
Ukulungisa ukuhlukunyezwa kwezingane ezincane
Uthando ubudlelwane: gcina ibanga noma uhlakaze kumlingani wakho
Ingcingo, ehlanjululwa nge-lime
Ngihlobo luni lwamafutha engingakwazi ukuqinisa izipikili zami
Ukuphila komuntu womculi u-Alsou